साहित्यकार डा. वानीरा गिरिको निधन – Upahar Khabar
प्रकाशित मिति : १० जेष्ठ २०७८, सोमबार १७:४६ May 24, 2021
काठमाडौँ – साहित्यकार डा. वानीरा गिरिको गए राति कोरोना सङ्क्रमणले निधन भएको छ । काठमाडौँ बानेश्वरस्थित निजामती अस्पताल पु¥याइएको आधा घण्टामा नै उहाँको निधन भएको थियो । उहाँ मधुमेह र अल्जाइमर रोगबाट पनि पीडित हुनुहुुन्थ्यो ।
नेपालमा खोप लैजाने पहल भइरहेको छ, हामी अहोरात्र खटिरहेका छौँः डा.खतिवडा [अन्तर्वार्ता]